Office maka mmadụ - Geofumadas
Office maka egwu
Lee nhazi UTM na Google Maps na Street View
Nzọụkwụ 1. Download data feed template. Agbanyeghị na isiokwu ahụ na-elekwasị anya na nhazi UTM, ngwa a nwere ndebiri na ohere na lonjituudu na ogo ogo, yana ogo, nkeji na sekọnd. Nzọụkwụ 2. Bulite template. Mgbe ị na-ahọrọ template na data, ...
Google Earth kml Office maka egwu
Detuo ihe, ederede na ederede nke polygonal si Excel ka AutoCAD
Enwere m ndepụta nke nhazi na Excel. N'ime ndị a, enwere nhazi X, nhazi Y, yana aha maka njedebe. Ihe m chọrọ bụ ịdọrọ ya na AutoCAD. N'okwu a, anyị ga-eji mkpokọta ederede site na ederede ederede na Excel. Concatenate a iwu maka inserting ihe na ...
AutoDesk Office maka egwu
Fanye maapụ na Excel - nweta nhazi ọnọdụ ala - nhazi UTM
Map.XL bụ ngwa na-enye gị ohere itinye map na Excel ma nweta nhazi site na map ahụ. Na mgbakwunye, ị nwekwara ike igosi ndepụta nke latitude na longitude na map. Esi tinye map na Excel Ozugbo arụnyere Mmemme ahụ, a na-agbakwunye ya dị ka taabụ ọzọ a na-akpọ "Map", na arụmọrụ nke ...
Google Earth Office maka egwu
Cartografia, Google Earth / Maps, mbụ echiche
Tapawa a spreadsheet n'ime AutoCAD, nke akpaghị aka melite
Ọ bụ ezie na anyị nwere ike iru n'okwu ahụ, na-egosi na onye na-ebubata ihe na Office bụ ngwa ọrụ nke ejiri akwụkwọ Excel ma ọ bụ faịlụ Okwu nwee ike jikọta ya, yana na ọ na-emelite nke ọma ka faịlụ izizi gbanwere, akụkọ ihe mere eme dị ka akaụntụ Brendan Haggerty bụ ụdị m ...
dwg Office maka egwu
Bubata nhazi site na Excel na QGIS ma mepụta Polygons
Otu n'ime ihe ndị a na-emekarị na ojiji nke Geographic Information Systems bụ iwu ụlọ nke mbara igwe site na ozi sitere n'ọhịa. Ma nke a na - anọchite anya nhazi, ngwugwu ngwugwu, ma ọ bụ okporo igwe dị elu, ozi a na - abatakarị na faịlụ ndị nọpụrụ iche ma ọ bụ na Excel.
Office maka egwu QGIS
Microstation: Mbubata mbubata na annotations si Excel
Ikpe ahụ: Enwere m data anakọtara na GPS Promark 100, na iji ngwa GNSS ntinye akwụkwọ nhazi ndị a nwere, ọ na-enye m ohere izipu ozi na Excel. The ogidi akara na-acha odo odo bụ n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ugwu na-achị achị na ha na nwoke annotation; ndị ọzọ bụ naanị ozi metụtara nhazi ozi. Nsogbu: Achọrọ m ndị ọrụ ka ...
Bentley Systems Office maka egwu
Tọghata ala-achịkọta na ntụpọ degrees, UTM na-eru na AutoCAD
Ebuputara ndebiri Excel a ka ị gbanwee nhazi ala na UTM, site na usoro ntụpọ ruo ogo, nkeji na sekọnd. Naanị ihe dị iche na ndebiri nke anyị mere n'oge gara aga, dị ka a hụrụ na ihe atụ: Ọzọkwa: Ọ na-eme ka ha dị n'otu eriri Ọ na-agbanwe ha na nhazi UTM, yana nhọrọ ịhọrọ ...
Coupons Office maka egwu
Otu esi enweta email sitere na Gmail site na iji POP3
N’isiokwu a anyị ga-ahụ etu esi ahazi POP Gmail. N'ihi na ndị na-eme njem ọtụtụ ma ọ bụ mkpa iji nweta email site na kọmputa dị iche iche, na-eji Microsoft Outlook ahịa bụ n'ezie ihere; Agbanyeghị maka ebumnuche ụlọ ọrụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe a na-apụghị izere ezere, mgbe ịmara Gmail, ọ na-adị ka onye ọgba iji jiri Outlook mere obere ọganihu ...
Idozi Smart Quotes maka Kwụ Ọtọ Quotes na Microsoft Okwu
Nke a na-abụkarị nsogbu, mgbe anyị dezie ederede HTML na Microsoft Word ma ọ bụ Live Writter. Nsogbu a bụ koodu dịka Ajụjụ dị iche iche banyere teknụzụ CAD Ọ ga-enye anyị nsogbu, ebe ọ bụ na akara akara anyị na-ejide ga-abụ ndị kwụ ọtọ dị ka ndị a: Ajụjụ dị iche iche gbasara teknụzụ CAD Mgbe anyị chọrọ iji dochie anya ...
Office maka egwu wordPress
Otu esi eji Microsoft Okwu
Microsoft Word na-abụkarị otu n'ime mmemme ndị anyị mụtara iji na-enweghị usoro. Site na ịpị na ịbanye anyị ghọtara na a na-eji ya eme akwụkwọ, na ọ nwere tebụl, na tebụl na-eme nchịkọta dị ka Excel nakwa na o nwere ụfọdụ ihe ndị ọzọ na Okwu Zuru Okè na-acha anụnụ anụnụ. O nweghi ...
Gosi faịlụ ndị na-adịbeghị anya, Okwu na Excel
Ọ na-emekarị anyị, na anyị na-echefu ebe faịlụ echekwara. Mgbe ụfọdụ, anyị na-agagharị ya, mepee ya na folda ihe nbudata ihe nchọgharị ahụ ma ọ bụ naanị windo nchọta Windows ochie bụ ọdachi. Ọfọn, ọ bụrụ na faịlụ ahụ so na 50 ikpeazụ anyị meghere, ụzọ kachasị ọsọ bụ iji hụ ya na ...
Esi ewepu commas na hyperlinks na nọmba na Excel
Ọtụtụ oge mgbe ị na-edegharị data sitere na tontanetị gaa na Excel, ọnụọgụgụ na-eweta commoma dị ka ọtụtụ puku ndị na-ekewapụ. Ọ bụrụgodi na anyị gbanwere usoro nke sel na ọnụọgụ, ọ ka bụ ederede n'ihi na Excel enweghị ike ịghọta ọtụtụ puku nkewaputa mgbe ọnụọgụgụ nwere nọmba 6, ya bụ, ihe karịrị otu nde. Aga m…
Internet na Blogs, ọtụtụ
Tụlee abụọ akwụkwọ dị ka Okwu
Ọtụtụ mgbe ọ na-eme anyị, na anyị na-arụ ọrụ na akwụkwọ, mgbe ahụ mmadụ gbanwere ya na-enweghị akara akara ngbanwe nke mgbanwe ma n'oge na-adịghị anya anyị na-ejide onwe anyị iji atụnyere abụọ. Agbanyeghị na anaghị m edekarị banyere mmemme maka mmadụ efu, m na-ewere ohere a n'ihi na ọrụ a gụnyere na Microsoft Word, ọ na-eme ya na ...
Nsogbu 4: Acer achọpụta otu, ezigala na Datashow
N'ihe banyere kọmputa Acer Aspire, nchikota iji zipu echiche site na ihuenyo gaa na projector na nyocha nke mpụga dị na Fn + F5. O nwere ike ime na ha azaghị, ma mgbe inwere mmadụ 200 n’ihu gị, ọ bụ nnukwu nsogbu. Ka anyị hụ otu esi edozi ya. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe niile na ...
Acer nwewa Emmanuel Office maka egwu
My egeomates, ọtụtụ
Gbanwee mkpụrụedemede na obere okwu na Microsoft Okwu na ihe ọzọ
Okwu 2007 na rịbọn ya, dị ka AutoCAD, hapụrụ anyị ụfọdụ ihe nchịkwa mgbe anyị na-eme ọsọ ọsọ. Nsogbu m na-achọ ịgbanwe ederede site na obere ka ọ bụrụ nke ukwu, nke bụ otu pịapụ na menu ahụ tupu. Amaghị m ebe ọ dị, ma ọ bụrụ na ọ dị ebe ahụ enweghị m ndidi zuru oke, yabụ m ...
Mgbanwe ogo / nkeji / sekọnd ka decimals
Oge ụfọdụ gara aga ajuola m nke a, ebe ọ bụ na enyi ahụ yiri obere ọsọ na ụbọchị taa bụ ụbọchị iji mee ọtụtụ ihe, nke a bụ ngwa ọrụ na-enye gị ohere ịgbanwe nhazi njikwa ala, ogo ruo ebe ntụpọ. Kedu ihe kpatara okpokoro ntughari? Ọ bụ ihe a na-ahụkarị nhazi na ogo, nkeji, sekọnd, ...
MapinXL, map si Excel
MapinXL bụ ngwa nke ARTICQUE wuru, maka ndị ọfịs, ndị abụghị ndị ọkachamara GIS mana ha chọrọ ịmasị maapụ nwere agba. Anyị na-etinye ndụ anyị niile iji jikọta map anyị na Excel, mara na ndị ọzọ enweghị ike ịdị anya na ngwọta Microsoft; ma n'ihi nke a anyị emewo otu puku ...
Otu esi amata paswọọdụ nke faịlụ
Enwere ngwaọrụ dị iche iche na ntanetị nke na - enye gị ohere ịchọta paswọọdụ nzuzo, ma ọ bụ dịka anyị ga - esi kpọọ ya taa: paswọọdụ nke faịlụ, ebughị m n'uche na post a iji kwalite echiche ọjọọ; Kama, kọwaa ihe egwu dị na ikwere na echekwabara data anyị niile n'ụzọ dị mfe n'azụ aha nke ...
innovations, Internet na Blogs
Advanced ArcGIS Pro Agụmakwụkwọ
Mụta iji atụmatụ dị elu nke ArcGIS Pro - GIS ngwanrọ nke dochie ArcMap Mụta ọkwa dị elu nke ...
Google Earth N'ezie: site na isi ruo na elu
Google Earth bụ sọftụwia nke gbanwere ụzọ anyị si ahụ ụwa. Ahụmahụ nke gbara gburugburu ...